Ilegharị Anya n’Alaka Ụlọ Ọrụ Ndịàmà Jehova Dị na Madagascar
7:30 ụtụtụ ruo 11:00 ụtụtụ na 1:00 ehihie ruo 4:00 mgbede
A na-asụgharị akwụkwọ anyị ndị e ji amụ Baịbụl n’asụsụ Malagasy, Tankarana, Tandroy, na Vezo. A na-emepụtakwa ihe ndị a na-egere egere n’asụsụ Malagasy. A na-ahazi ọrụ ọgbakọ Ndịàmà Jehova ruru 832 na-arụ na Madagascar. Kwa ọnwa, a na-ebupụ akwụkwọ ruru narị puku abụọ na puku iri asaa, ya na magazin ruru narị puku isii.
Ilegharị Anya n’Alaka Ụlọ Ọrụ Dị na Madagascar